उपेन्द्र यादवलाई आयो प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्ताव, शेरबहादुर देउवाले के गर्लान् ? | Khabar Sadan खबर सदन
Home राजनीति उपेन्द्र यादवलाई आयो प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्ताव, शेरबहादुर देउवाले के गर्लान् ?
काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको छ । जसपाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका यादवलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको हो ।
उनलाई यो प्रस्ताव अन्य कतैबाट नभई जनता समाजवादी पार्टीकै नेतृ हिसिला यमीबाट आएको हो । जसपा संघिय परिषद् सदस्यसमेत रहेकी । यमीले सामाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै यादवलाई प्रधानमन्त्री बन्ने आँट गर्न सुझाव दिइसकेका छन् ।
देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री खान खुट्टा उचालिरहेका बेला उनलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव आएको हो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका यादव सरकारमा सहभागी नभई अन्य नेतालाई नेतृत्व गरेर पठाउनुपर्ने विषयबारे छलफल बढिरहेको छ ।
उनलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको बताउने पनि छन् । उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री बन्ने रहर गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री नबनाउने बताएका छन् ।
जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादव सरकारमा जान नहुने सुझाव दिएको बुझिएको छ । हिसिला यमीले ट्वीट गर्दै यादवलाई प्रधानमन्त्री बन्ने आँट गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । उनले यादव अहिले सरकारमा जान नहुने सन्देश दिनेगरी ट्वीट गर्नु अर्थपूर्ण छ
जसपामा को को सरकारमा जाने टुंगो उपेन्द्र यादवले मात्र लगाउन नसक्ने अवस्था विकास भइसकेको छ । बाबुराम भट्टराईको प्रभाव बढेको छ । ओली सरकार ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकाले देउवाले पनि उनलाई महत्व दिन थालेका छन् ।
सरकारमा जानेहरुको सुची टुंगो लगाउँदा यादव रोकिएमा अर्को सांसदको ढोका खुल्नेछ । अर्कोतर्फ, बाबुरामको प्रभाव झन् बढ्ने भएकाले यादवलाई रोक्ने प्रयास भइसकेको छ ।
Previous articleसार्वजनिक स्थलमा एम्बुलेन्स हल्लिरहेको पाइयो, स्थानीयले प्रहरी बोलाएपछि देखियो यस्तो लाजमर्दो दृश्य
Next articleअस्पतालमा पोस्टमार्टम गर्न लगिएको शव चिया पिउँदै गरेको भेटिएपछि, सबै जना चकित
काठमाडौं – आज बेलुका मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले...
विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा पछिल्लो २४ घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ३ हजार ४ सय ९ वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको...
पिम्प्ल तपाईंको मुख्मा किन आउछ?,यस्तो गल्ती नगर्नुहोस र यस्तो गर्नुहोस
मुरुमहरू, जसलाई एक्ने पनि भनिन्छ, देखा पर्दछ जब तपाईंको छालाको तेल ग्रन्थिहरू ओभर्याक्टिभ हुन्छन् र छिद्रहरू फुल्छन्। केहि प्रकारका छाला ब्याक्टेरियाले पिम्पल्सलाई नराम्रो बनाउन...